Nhau - Jiangxi Flor akahwina zita rekuremekedza re "Yepamberi Boka reIndasitiri neRuzivo System Kurwisa Nyowani Coronary Pneumonia"
Nekutenderwa nehurumende yepakati, iyo Ministry of Industry uye Information Technology nguva pfupi yadarika yakarumbidza boka revatambi vepamusoro pamwe nevanhu vemberi avo vakabuda mukurwisa denda idzva repneumonia. Jiangxi Flor akahwina zita rekuremekedza re "bato repamberi mukurwira nyowani nyumoniya mumaindasitiri uye masisitimu eruzivo" (Vatatu chete muPurovhinzi yeJiangxi).
Vashandi vazhinji vezvehutano vakatapukirwa nehutachiona uye vakatopa hupenyu hwavo hwakakosha. Ivo vanoshandisa hupenyu hwavo kududzira chikuru chekutanga chinangwa chevaChinese maCommunist kushandira vanhu nemoyo wese uye kwete kutya zvibayiro. Ndiwo musana werudzi. Pane imwe nguva, nemweya uyu, bato redu rakatungamira vanhu kuti vakunde vavengi vane simba kuburikidza nematambudziko mazhinji nenjodzi, uye rakaita kuti vanhu vechiChinese vasimuke, vafume uye vave nesimba.
Pakutanga kwegore, Jiangxi Flor akanyatsoteerera kudaidzwa kwebato nehurumende mukutarisana nedambudziko idzva rekorona. Gore rino, vashandi vese veJiangxi Flor vakashanda pamwechete kuburikidza nemadutu nematambudziko, vakazvipira ku "denda rehondo", uye vaiita hunhu hwepamoyo hwaFlor: chikonzero uye mhedzisiro, huchenjeri, hunyanzvi, uye nerudo muhondo yakaoma. Rukudzo rwunobva kubazi rezvemaindasitiri neruzivo rwetekinoloji zvakare rakafemera "flore" dzese! Isu tinoteedzera zvisina tsarukano kuendesa uye zvinodiwa zveParty Central Committee, hatimbofi takakanganwa zvishuwo zvedu zvepakutanga, chengetedza chinangwa chedu mupfungwa, uye nekupa simba pasainzi uye tekinoroji yemabhizinesi emunyika.